Mobile App Development | Saturngod
9 Replies Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged mobile, video on April 10, 2011 by saturngod. Post navigation
← Ornagaime Giveaway
Before host on VPS →
9 thoughts on “Mobile App Development” Thinzar April 10, 2011 at 10:54 pm အစအဆုံး နားထောင်သွားပါတယ်။ မသိသေးတာတွေ တစ်ချို့ သိလိုက်ရတယ်။ samsung ရဲ့ Bada နဲ့ Nokia ရဲ့ Maemo ကော စျေးကွက် မရှိနိုင်ဘူးလား။
Reply ↓ saturngod Post authorApril 10, 2011 at 11:00 pm Bada OS အတွက် application ပေါင်း 2011 first quarter မှာ 3000 ပဲ ရှိသေးတယ်။ Nokia က windows phone7နဲ့ ရှေ့ဆက်မှာဆိုတော့ Maemo ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက Intel ရဲ့ လက်ထဲ ရောက်သွားပါပြီ။ Mameo ကတော့ အခြေအနေက ကောင်း​ပေမယ့် developer တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ စျေးကွက်ထဲမှာ မရှိဘူး။ လူသုံးလည်း အရမ်းနည်းတယ်။ Nokia သမားတွေက Maemo ထက် Symbian ကို ပိုသဘောကျနေတာကြောင့် စျေးကွက်အနေနဲ့ ဝင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ဆိုရမယ်။ တခြားနေရာမှာ ပေါက်ထားတဲ့ game တွေ ကသာ စျေးကွက်အသစ်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်လာနိုင်တာပဲ ရှိလိမ့်မယ်။
Reply ↓ Nyein April 11, 2011 at 12:08 am ကျေးဇူးပါ အကိုရေ.. မသိတာတွေ အကုန် သိလိုက်ရပါတယ်။
Reply ↓ Myong April 11, 2011 at 11:40 pm Plea how to jailbrakes to phone for Myanmar language.
Reply ↓ saturngod Post authorApril 11, 2011 at 11:41 pm ask in http://www.mysteryzillion.org
Reply ↓ kyukyulwin April 23, 2011 at 6:44 pm HI,
i am trying to open pdf file by using MVC2web application and Jquery Mobile. But pdf file doesn’t open it well.How shall i do and which tools can i use to open pdf .plese let me know jquery mobile can be able to open pdf file .
Reply ↓ saturngod Post authorApril 24, 2011 at 8:06 am ??? open pdf like what ? when you add link to pdf , it will be download.
Reply ↓ KyuKyuLwin April 25, 2011 at 5:28 pm သုံး ချင်တာက iphone နဲ pdf ကို ဖွင့်ဖတ်ချင်တာပါ..အဲဒါ.. vs 2010 mvc2နဲ ရေးချင်လို.
mvc2နဲ ရေးထားတဲ site ကို iphone မှာကြည့်လိုရပါမလားအစ်ကို…
jquerymobile နဲ mvc တွဲ သုံးတာလဲ pdf ဖွင့်တာ ဘာမှပွင့်မလာဘူး… အဲဒါကြောင့် mvc2နဲ ပဲရေးကြည်တာ..
ဖြစ်ချင်တာက link ကို click လိုက်ရင် pdf ကို ဖွင်ကြည်မှာလား ? download လား မေးချင်တာ user က ကြိုက်ရာရွေး လို့ရအောင်….
အဲဒါ jquery mobile မသုံးပဲနဲ MVC2နဲ mobile phone မှာ run လိုရပါမလား…
သုံးမှရမယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါနော်……..
Reply ↓ saturngod Post authorApril 25, 2011 at 5:32 pm you should ask on http://www.mysteryzillion.org … pdf can open from safari . if you can’t open , it’saproblem from server side. jquery mobile and ASP.NET is HTML output and it can run on safari. it’s website.
အောင်မြင်တဲ့ ယောကျ်ား နောက်မှာ တော်တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ရှိတယ်။ အောင်မြင်နေတဲ့ မိန်းမ ရဲ့ နောက်မှာတော့ အသုံးမကျတဲ့ ယောကျ်ား တစ်ယောက် ရှိတယ်။ — အမည်မသိ ခေတ်စာဆို Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod